Blog Reader: =?utf-8?Q?=5bLaminkhin=5d_=31_New_Entry=3a_=e1=80=80=e1=80=af=e1=80=9c=e1=80=9e=e1=80=99=e1=80=82=e1=81=a2=e1=80=86=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=84=e1=80=b9=e1=80=9b=e1=80=ac_=e1=80=85=e1=80=85=e1=80=b9=e1=80=a1=e1=80=85=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=b8=e1=80=9b=e1=80=9b=e1=80=b2_=e1=80=b7=e1=80=9e=e1=80=b6=e1=80=a1=e1=80=99=e1=80=90=e1=80=b9_=e1=80=80=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=96=e1=80=9a=e1=80=b9=e1=80=9b=e1=80=bd=e1=80=ac=e1=80=b8=e1=80=b1=e1=80=9b=e1=80=b8=28Credential_Challenge_=29=e1=80=86=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=90=e1=80=b2_=e1=80=b7_=e1=80=94=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=84=e1=80=b9=e1=80=84=e1=80=b6=e1=80=b1=e1=80=9b=e1=80=b8=e1=80=85=e1=80=ad=e1=80=99=e1=80=b9=e1=80=b1=e1=80=81=e1=81=9a=e1=80=99=e1=82=88=e1=80=80=e1=80=ad_=e1=80=af=e1=80=98=e1=80=9a=e1=80=b9=e1=80=9c=e1=80=ad=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=85=e1=80=ae=e1=80=85=e1=80=85=e1=80=b9=e1=80=9e=e1=80=af=e1=80=b6=e1=80=b8=e1=80=9e=e1=80=95=e1=80=b9=e1=82=8f=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=84=e1=80=b9=e1=80=95=e1=80=ab=e1=80=9e=e1=80=9c=e1= 80=b2_=3f?=
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ စစ်အစိုးရရဲ့ သံအမတ် ကိုဖယ်ရှားရေး(Credential Challenge )ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးစိမ်ခေါ်မှုကိုဘယ်လိုစီစစ်သုံးသပ်နိုင်ပါသလဲ ?
၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ က နိုင်ကျော်ရဲ့''စစ်အစိုးရ သံအမတ်အား ဖယ်ရှားရေး စိမ်ခေါ်ချက် လက်တွေ့ကျပါ့ မလား ? '' ဆိုတဲ့ အင်တာနက်ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့် လိုက်တဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံရေးအသိရေချိန်နိမ့်ကျ သူများကြားမှာ အတွေးမှား အမြင်မှောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ကျော်ရဲ့ အချောင်သမား အယူအဆကို ဝေဖန်ပြလိုပါ တယ်။
(၉၀)ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ပွဲပုံစံ (၃)မျိုးနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် လုံးပမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြတယ်။ (၁) လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲ ခြင်း၊
(၂) မြို့ပြဒေသဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဖော်ဆောင်ခြင်း၊
(၃) နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး အင်အားစုများက ကုလသမဂ္ဂ
အပါအ၀င် အမေရိကန် ၊ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရများ အင်အားစုများ ကို ချဉ်းကပ်စည်းရုံးခြင်း (Lobby) တို့ ကို ဆောင်ရွက်နေတာ (၁၈)နှစ် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကနေ့့ထိအောင်ပွဲ မခံနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့်လဲ ဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၁) ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ဗကပ တို့ ရဲ့ပန်ဆန်း ပုန်ကန်မှု ဖြစ်ပြီးနောက် လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲံ့များသီးခြားပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီ့နောက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များဟာ ငြိမ်းအဖွဲ့ များ ဖြစ်လာ ခဲ့ကြလို့စစ်ဝါဒီတွေအတွက် များစွာအသက်ရှူချောင်စေခဲ့တယ်။ရှမ်း၊ ကရင်နီ နဲ့ ကရင်အမျိုး သားတွေကသာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေကြတယ်။
(၂) (၉၀)ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဒီချုပ် နဲ့ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေက လွှတ်တော် ခေါ်ပေးရေး- အာဏာ(၃)ရပ်ကို ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေထံ လွှဲအပ်ပေးရေး တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြပေမယ့် အောင်မြင်မှုမရ ဖြစ်နေပါတယ်။
(၃) ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ လုံးပမ်းအားထုတ်မှု တွေကလည်း အောင်မြင်မှု မရ ဖြစ်နေပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲစေတဲ့ အကြောင်းအချက် သုံးမျိုး မှာ ပထမနဲ့ဒုတိယအချက်တွေက ပြည်ပရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေ ကောင်းစွာသဘောပေါက်ကြ ပါလိမ့်မယ်။
တတိယအချက်ကတော့ ပြည်ပရောက်ဒီချုပ် အဖွဲ့(LA) ၊ လွှတ်တော်အမတ်များအ ဖွဲ (MPU)့ န့ဲ့ အဝေးရောက် အမျိုးသားညွှန့် ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ (NCGUB)တို့ က ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်ရေးလုံးပမ်းကြရမယ့်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသုံးဖွဲ့ ဟာနိုင်ငံရေးအရ ၊ စည်းရုံးရေး အရ ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းတဲ့ အဖွဲ့ များ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။သမိုင်းပေးတာဝန်ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ကျော်ရဲ့ " သံအမတ်ဖယ်ရှားရေးစိမ်ခေါ်ချက် လက်တွေ့ ကျပါ့ မလား? " ဆောင်းပါးပါ အချက်တစ်ချို့ကိုကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုပါတယ်။"မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အုပ်စု၏ ပြည်သူ့ အပေါ် နှိပ်စက်ကလူ ပြုမူနေမှုများသည် မြန်မာပြည်သူများသာမက ကမ္ဘာ့ ပြည်သူများပါ သည်းမခံနိုင်စရာဖြစ်နေသည်ကို လူသားချင်းစာနာသူတိုင်း သတိထားမိ ကြမည်ဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းမှ စစ်အစိုးရအား ဖိအားပေးအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများ ယနေ့ ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့မြင်ကြရပေသည်။"
'' နအဖ စစ်အစိုးရသည် အာဏာရှင်တို့ ထုံးစံအတိုင်း ၎င်းတို့ အာဏာတည်မြဲရေးကိုသာရှေးရှု ပြီး ပြည်သူလူထုအား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်း ၊နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း စသည်တို့ ကိုသာ အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်မြဲ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ ရသည်။"
အဲဒီရေးသားချက်များဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေနေမှန်တွေကို ထင်ဟပ်ထားတဲ့ အတွက် ထောက်ခံနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်"ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟောင်း(၁၁၂)ဦးတို့ကယူအန်အတွင်းရေးမှုးချုပ်ထံပေးပို့တဲ့ဖိအားပေးရေးတောင်းဆိုချက်များနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ လွှတ်တော်အမတ် များကောင်စီ (AIPMC)မှ ကမကထပြုပြီး ယူအန်မှုးချုပ်ထံ အလားတူ ပေးပို့ ချက်တို့ သည် နအဖ အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးရေးလုပ်ငန်းတွင်အင်မတန် ထိရောက်သည့် အရေးယူဆောင် ရွက်မှုများ ပင်ဖြစ်သည်"ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်ဟာ ပကတိဖြစ်ရပ်မှန်တွေနဲ့ ကင်းကွာနေပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုတို့ ဟာ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ပန်း နဲ့ ပေါက်ခံရသလို ယူဆနေပါတယ်။သူတို့့ဟာအလွန်အကျွံ ခေါင်းမာသူတွေဖြစ်ကြသလို ဖက် ဆစ်အာဏာရှင်တွေလို လွန်မင်းစွာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့် မို့ 
နိုင်ကျော်ပြောသလို အင်မတန်ထိရောက်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါ။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ - နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွှတ်ပေး ရေး၊ လူ့ အခွင့့်် အရေးပေးရေး ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုဦးတည်တဲ့ စားပွဲဝိုင်းဆွေး နွေးပွဲ တောင်းဆိုမှုတွေ - လူမျိုးစုဒေသတွေမှာ အနိုင်ကျင့် လုယက်မှု၊ မုဒိန်းမှုတွေကျေးရွာများ မီးရှို့နေမှုတွေကိုရပ်စဲဖို့တောင်းဆိုချက်တွေ-ကို စစ်ဝါဒီတွေကဘာတစ်ခုမှ လိုက်လျောအကောင်အထည်ဖော်တာမရှိသေးပါ။စစ်ကောင်စီက ရှားရှားပါးပါး အပြုဖက်ဆောင်ရွက်တာဆို လို့အိုင်စီအာစီ (ကြက်ခြေနီ) အဖွဲ့ ထောင်ထဲက်ို ၀င်ကြည့်ခွင့်ပြုတာ ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းတို့ ကောင်းကောင်းကြီးသဘော ပေါက်နေတာကတော့ "ကုလသမဂ္ဂတပ်တွေ၊မြန်မာ့ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်းဝင်ရောက်မလာနိုင် "ဆိုတာနဲ့ "နေတိုးတပ်ဖွဲ့ တွေဟာ အီရတ်နဲ့ အာဖဂန်နိုင်ငံတို့ မှာ နွံနစ်နေတယ်" လို့ သူတို့နားလည်ခံယူထားကြတယ်။
ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတို့ က စီးပွားရေးအရ ၊နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လောက်အရေးယူယူ စစ်ကောင်စီက ပန်းနဲ့ ပေါက်တာလိုသဘောထားနေကြတယ်။
နိုင်ကျော်ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ "မိမိယူဆချက်မှာ ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်များကြား၊ မြန်မာ့ပြဿ နာများကိုတင်ပြနိုင်ဖို့မှာ ကုလသမဂ္ဂတွင် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုသည် ထက် မိမိ၏ချဉ်းကပ်နိုင်မှု နည်းနာများသည် တခုလုံးအကျိုးစီးပွားအတွက် မည်မျှထိရောက် သည် မထိရောက်သည်ကသာ အဓိကကျသည့် ကိစ္စဖြစ်သည် ဟုထင်မြင်မိပါသည်။ (မဟာဗျူဟာ အကျုိးသက်ရောက်မှုကို ဆိုလိုဟန်တူပါသည်။)
နိုင်ကျော်ရဲ့ အယူအဆကိုသဘောမတူပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာကုလသမ ဂ္ဂက အရေးယူနိုင်တာ အဆင့်မြင့်ဆုံး (၂)ချက်ရှ်ိပါတယ်။ (၁)ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာသံအမတ်ကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း၊ (၂) လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ်းသိမ်းမှုတပ်တွေ မြန်မာပိုင်နက်ထဲ ၀င်ရောက်ခြင်းတ့ို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ( အီရတ်၊ကူဝိတ် စစ်ပွဲနဲ့ အာဖဂန်နိုင်ငံတွင်း ၀င်ရောက်ပြီး တာလီဘန်အစိုးရကိုဖြုတ်ချခြင်း )
မြန်မာသံအမတ်ကို ကုလသမဂ္ဂမှ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာအကျိုးအမြတ်ရ နိုင်ပါတယ်။ (၁) စစ်ကောင်စီရဲ့ အမိန့် အာဏာကို နာခံနေကြတဲ့ ကြည်းရေလေ တပ်မတော်အတွင်းက စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေရ့ဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက်ို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို စီးပွားရေးအရ ၊ နိုင်ငံရေးအရ ၊ လူမှုရေးအရ ခုခံဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။
(၂) အေစီယံ နိုင်ငံတွေအတွင်းမှာ မြန်မာအစိုးရ တည်ရှိမှုကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။
(၃) စစ်အစိုးရနဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ရုရှား နိုင်ငံအစိုးရတို့ အကြား ဆက်ဆံရေး နွေး
(၄) ပြည်တွင်းရှိဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို မြင့်မားစေမှာ
ဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကို တိုးမြှင့် တင်နိုင်တယ်။
နိုင်ကျော်ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာက " လက်ရှိအခြေအနေတွင် ပြည်သူတို့ ၏မဲများကို အတင်းလုယူ၍အတည်ပြုခဲ့သော ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အသက်သွင်း နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်ကို ဇွတ်ကျင်းပရန် နအဖ အစိုးရ က စီမံဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ ၄င်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် (၉၀)ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပါတီများနှင့် (၉၀)ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အပြီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် စစ်အစိုးရ ၏ ကြံရွယ်အားထုတ်ချက်များ ဖြစ်သည်။'"အဲဒီအပိုဒ်ကတော့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးကို မှန်ကန်စွာ အကဲဖြတ်တာဖြစ်လို့ သဘောတူနိုင်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာ စစ်ဝါဒီတွေရဲ့မဟာဗျုဟာလုပ် ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်သင့်ပါတယ်။သူ့ ဘက်ကရန်သူ မိတ်ဆွေ စည်းကြောင်းဆွဲပြ လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလဲ မိမိတို့ ရဲ့ ခွန်အားတွေကိုအစွမ်းကုန်အသုံး ချပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆန့် ကျင်ရေး- ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဖျက်ဆီးရေးတို့ ကိုသံဓိဋ္ဌာန် ချမှတ်ပြီး တိုက်ပွဲဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရဲ့ (Credential Challenge) တင်ပြချက်ကို အမျိုး သားကောင်စီက ထောက်ခံထားသလို ပြည်ပရောက်ဒီချုပ် အဖွဲ့ တွေကလဲထောက်ခံသင့်တယ်၊ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းခေါင်းဆောင်တဲ့ ညွှန့် ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ ကလဲမိမိတို့ ရဲ့ အမှားတွေကို ရှာဖွေ ပြင်ဆင်ပြီး(MPU)အဖွဲ့အမျိုးသားကောင်စီတို့ နဲ့ နိုင်ငံရေးညီညွှတ်မှုကို တည်ဆောက်ရယူပြီး စစ်ဝါဒီတွေရဲ့့ဖောက်ပြန်မှုလိမ်လည်မှုတွေကို ဖွင့်ချတိုက်စစ်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အနီးခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ( ၁၉၄၄) ဖက်ဆစ်အုပ်စိုးမှုကာလနဲ့ (၁၉၄၄) ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရကာလတွေနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ယူဆတယ်။(၁၉၄၄)ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊သခင်သန်းထွန်း ၊သခင်ဗဟိန်းနဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးကျော်ဇော တို့ ရဲ့ ဖက်ဆစ်ဆန့့့်ကျင်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ အလွန်တူသလို (၁၉၄၇)ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ ဖဆပလ ယာယီအစိုးရတို့ ဟာလက်ဝဲဖက်က သခင်စိုးဦးဆောင်တဲ့အလံနီ ပါတီနဲ့ သခင်သန်းထွန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ ဗကပ တို့ ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံနေ ရသလိုလကျာ်ဖက်မှာလဲ စော-စိန်-မော် ဂိုဏ်းအုပ်စုတွေကလဲ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရကို အလျှော့ ပေးလိုမှုကြောင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ သခင်မြတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဖဆပလ အဖွဲ့ ချုပ်က တနှစ်အတွင်းလုံးဝလွတ်လပ်ရေးပေးရမယ် ဆိုတဲ့စိမ် ခေါ်ချက်က်ို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မို့ဇူလိုင်(၁၉)ရက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ မြန်မာပြည် သူတွေစည်းလုံးညီညွှတ်ကြပြီးပြည်တွင်းပြည်ပ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အောက်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်သားစွာ တိုက်ပွဲ ဆင် နွှဲကြဖို့သမိုင်းကတောင်းဆိုနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://laminkhin.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.